Push Uhlobo lweMascara lokugcwalisa umatshini, umatshini wokuPhawula ngeFlat - i-Eugeng
U-Eugeng ngumenzi ngobuchule kunye noyilo loomatshini bokuthambisa eShanghai. Siyaqhubeka nokuzama ukuyikhulisa kukukhula kwegama ngaphakathi kwishishini lezithambiso ngokuhlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye siya kubonelela ngetekhnoloji yamvanje kunye neyona ndawo iphakamileyo kunye nolwazi ngesisombululo esifanelekileyo ngokuhlala sisengaphambili kwimfuno yomthengi. Oomatshini bethu abaphambili kubandakanya umatshini wokugcwalisa i-lip gloss, umatshini wokugcwalisa i-mascara, umatshini wokugcwalisa i-nail polish, umatshini wokugcwalisa oshushu, umatshini wokugcwalisa i-lip balm, umatshini wokugcwalisa umlomo, umatshini wokugcwalisa i-cream, umatshini wokucofa umgubo, umatshini wokugcwalisa umgubo, umatshini wokwenza umgubo Umatshini wokulebhelisha i-lip gloss mascara njl.
Inkampani i-Eugeng International Trade Co., Ltd.
Umxholo wethu wophawu "yimpilo, ifashoni, ingcali". Kukuqondwa kwabathengi kuphela okunokubonisa ixabiso lethu. Sibeka umgangatho weemveliso kwindawo yokuqala!
Imigca yokuvelisa umgubo wokubhaka
Okokuqala, ukuxuba, 1 seta i-20L itanki yokuxuba; Isantya sokuxuba sinokuhlengahlengiswa; Umxhubi wokukhuhla asuse ngokulula kwaye enze kwakhona; Ixesha le-CW kunye nexesha leCCW lihlengahlengiswa; Itanki inokuvula i-90degree ukuba ikhutshwe ngokulula okwesibini, extrusion, 1 set 10L tank; Qhafaza ...
I-2020 ye-CBE kwinombolo ye-Shanghai N4-H21
Ngo-2020, siya kwi-CBE efanelekileyo eShanghai ukususela ngoJulayi 8 ukuya ku-12. Sibonisa iimveliso zethu eziphambili, ezinje ngomatshini ojikelezayo wokugcoba imilebe, tyhala uhlobo lomlomo wokugcoba umatshini wokugcwalisa umatshini, umatshini wokucinezela umgubo, umatshini wokubhaliweyo othe tyaba, i-cosmet ...